Imisipha emanzini ihamba rhoqo, kwaye iliso lethu lijonge ukugxila kule nkqubela kunye nokutshintshisa kunokuba umzekelo ophantsi. Kodwa nqabela isenzo ngekhamera kwaye kuba lula ukubona. Ngamanye amaxesha ii-v zikhohlakele kwaye zibukhali, ngamanye amaxesha zihlala zithele, kwaye zidla ngokuxubusha. (Nazi iifoto ezimbini zokubhaliweyo onokuzikhethela ukuzisebenzisa: utywala obumnandi kunye novulo olubanzi .)
Gxila kwiPatheni elwandle
Fumana iphethini phantsi kwezibhamu ezisebenzayo (umfanekiso 1 kungekhona kumfanekiso wesi-2), kwaye uhlala apho! Ifoto © 2011 Marion Boddy-Evans. Ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Amagama ahlukeneyo asetyenziselwa ukuchaza iphethini: i-V, i-scallops, i-triangles, iigzags ezixubileyo . Liliphi igama olilisebenzisileyo alibalulekile; oko kubalulekile kukuba ukhumbule ukuba kufuneka bawuthinte (umfanekiso 1) ukuba bangahluki (umfanekiso 2) kwaye ukuba iphethini ayifumanekanga.
Le yindlela yokwenza umzobo wepeyinti yakho yecala , kunokuba uzame okokuqala ngopopayi. Qala nge pensile kunye nepeni, usebenza kunye nemigca kuphela. Fumana ingcamango yendlela umzekelo osebenza ngayo ngaphambi kokuhamba kumbala. Dweba umgca wecangca, inkulu kunokuba ungayifumana kwisithonjana . Ekugqibeleni uya kuqhuba oku ngezinga elikhulu, kodwa kulula ukuqala encinci. Dweba umgca wegigzag oqhaqhazayo kwicala, ecaleni phezulu, omnye ungaphantsi kweli elichaphazela okokuqala; phinda uphinde uphinde ude usesezantsi (umfanekiso 1).
Yenza oku ubuncinane amaxesha aphindwe kabini, njengokuphindaphindiweyo indlela eya kuba yinto engafanelekanga ngayo. Ukuba utyhafile ngemigca, ziguqula ngokupenda kwinqanaba 'leethathu' njengelizwi elimnyama kunye neetoni eziphakathi kunye nokukhanya. Ekugqibeleni uyakwazi ukupenda ngemibala yolwandle ngaphandle kwemigca, kodwa kufuneka uchithe ixesha elincinane ukuqonda umzekelo wokuqala.
Khumbula, iimbono zibhekiselele kwiintshukumo, nazo. 'Iinqwelathu' zincinci kwaye ziya kufutshane ngokubanzi, zibhekiselele.
Emva kokuba ufumene umzekelo wesimo esisezantsi kwiimvuthu, shintshela kwibrashi uze wenze okufanayo nokuba wayenayo ipencil okanye ipeni, kodwa unemivalo emincinci (umfanekiso 4) endaweni yoko. Ukuba wenza umonakalo okanye uhamba kakuhle, usasaze upende uze uzame kwakhona ngomnye umhlophe (umfanekiso wesi-5).
Ukuba ufumanisa ukuba uthambekele ekwenzeni umgca omtsha kumzekelo wakho wesigxina (umfanekiso 3), zama ukuphula isigqi ngokunyusa omnye umntu, ukuqhuma komntu phakathi koko wenze (umfanekiso 4). Enye 'inkohliso' ukudweba umgca ngamnye ukusuka kwicala elithile, ngoko omnye ushiye ngakwesokudla nakwesilandelayo ngakwesokunxele.
Isinyathelo esilandelayo kukukwenza ngepende ngaphandle kwemigca yokuqala, kunye neetoni ezahlukeneyo, ukuze ekugqibeleni akukho zikhefu ezimhlophe. Kulula kakhulu xa uqala ngokupenda umxube wonke phakathi kwetoni, bese wongeza 'iinqwelathu' emnyama kunye neetoni ezimbalwa (umfanekiso 6).
Le ndlela yindlela nje yokuqala kwipayipi ebonakalayo yolwandle. Uyakukufumana ukwandisa kwaye uyihlakulele njengoko usebenzisa, umzekelo ngokusebenzisa i-bragger brush.
Ukusebenzisa i-Rigger Brush ye-Ripples
Ifoto © 2011 Marion Boddy-Evans. Ilayisenisi ku-About.com, Inc.
I- bragger brush ifanelekile ukupakisha imifanekiso njengokuba ikunika umgama omde ngaphandle kokuyeka ukulayisha i-brush. Inqakrazo yokupenda umgca ococekileyo ococekileyo kunye nomkhonto ukukrazula ibrashi, kungekhona ukuzama ukuyichukumisa.
Umgca uyadalwa njengoko uslayidiza i-brush ephezulu, kungekhona ngokususa ipende kwi-surface. Ukuze ufumane umgca obanzi, wehlisa i-bristles ngaphezu kweyona nto echaphazelayo. Ukuze uhluke ububanzi bomgca wecala, vula i-brush phakathi kweminwe yakho ukuze iqhube indlela encinane. Ukunciphisa umgca kwakhona, phakamisa ibhrashi njengoko uyidonsa kude kube yinto kuphela echaphazela ngayo.
Indlela yokudibanisa imifino
Iimfihlelo zokuPenda kwiSimboli seNkalo
Uxube lweMedia Media
Idemo yokuPenda kweeNkcazo usebenzisa iipencilisi zeNktense
Isikhundla esibi kwiPainting
Imidixu edibeneyo: I-Charcoal kunye neGraphite
Thenga iKrisimesi kwi-Intanethi
Indlela i-Mollusks eyenza ngayo iiparele
Ngaba Ingxenye yeKur'an Condone "Ukubulala i-Infidel"?
I-Cancer ne-Leo: Uthando lwabo luhambelana
Ungalokothi Ulibale Le mizuzu ye-Shirtless, Nerf-Toting Leonardo DiCaprio
ISUNY State Buffalo State GPA, SAT kunye ne-ACT Data
Renzo Piano - Izakhiwo ezili-10 kunye neeprojekthi
UGertrude Stein (1874 - 1946)
Mayelana neZakhiwo eziPhambili kwiLizwe